Burmese translation of "Socialism and Religion", by V.I. Lenin.
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မာ့စ်ဝါဒီတယောက်အနေနဲ့၊ လီနင်ရဲ့ရေးသားချက်တွေထဲက သက်ဆိုင်ရာ စာတွေ စုထုတ်ထားတဲ့ “ဘာသာရေး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ၁၉၃၃ မှာ နယူးယောက်မှာ ထုတ်တယ်။ လန် ဒန်မှာ ၂၀၁၂ မှာ ပြန်ထုတ်တယ်။ အဲဒီထဲက စာတချို့ကို ကောက်နုတ်ပီး၊ မာ့စ်ဝါဒီတွေ ဘာသာရေးကို ဘယ်လို မြင်သလဲ၊ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဘယ်လို လက်ခံထားသလဲ၊ မာ့စ်ဝါဒီတွေဟာ ဘာသာမဲ့တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နည်းနည်းချင်း ရေးသွားမယ်။ ဗမာက ဗုဒ္ဓဘာသာ မာ့စ်ဝါဒီကြီး တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မာ့စ်ဝါဒထည့် ဟင်းပေါင်းလုပ် မွှေခဲ့တဲ့ အညမည မဆလ အစွဲ မကျွတ်သေးသူ တွေ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆ နှစ်ခုဟာ ရှေ့နောက်ညီညွှတ်မှုရှိသလား ပြန်စဉ်းစားနိုင်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မာ့စ်ရော၊ အိန်ဂယ်ရောဟာ ရုပ်ဝါဒီတွေပါလို့ ကိုယ်ဘာသာ လက်ခံထားသူတွေပါ။ ရုပ်ဝါဒ အတွေးအ ခေါ်ကို ရေးသားရာမှာ ဘာသာရေးနဲ့ နှီးနွှယ်ဆင်းသက်လာတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို မာ့စ်တို့ အရင် ဝေဖန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် မာ့စ်က Critique of Hegel’s Philosophy of Right စာအုပ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ စာသားတခု ရှိတယ်။ “ဘာသာရေးကို ဝေဖန်တာဟာ ဝေဖန်မှု အားလုံးရဲ့ အစပဲ (The criticism of religion is the beginning of all criticism)”။ အစောပိုင်းကာလ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုတွေတုန်း ကတိုင်၊ အလုပ်သမားထုဟာ ဘာသာရေးကို လက်မခံကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်၊ “ဘာသာမဲ့မှု ဆိုတာ ဥရောပ လေဘာပါတီတွေ လက်တွေ့ လက်ခံပီးသား အချက်ပဲ” လို့ အိန်ဂယ်က ၁၈၇၄ မှာ ရေးတယ်။ အလားတူပဲ၊ “လူတန်းစား အကျိုးစီးပွားသိစိတ် နိုးကြားပီးသား ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တွေဟာ ဘာသာမဲ့ တွေ ဖြစ်တယ်”လို့ လီနင်လည်း ၁၉၀၉ မှာ ပြောတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့၊ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှု ရဲ့ အခုလို လောကီဆန်မှုဟာ ယိုယွင်းကျဆင်းလာတာ ရှိတယ်။ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီက ဘူဇ ၀ှာပေါက်စတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု ရဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေး ဆန္ဒစွဲတွေဘက် ယိမ်းလာတာ ရှိတယ်။
ဘုရားကျောင်းတော်ရေးရာနဲ့ အစိုးရ ရေးရာကို ခွဲခြားထားဖို့၊ အစိုးရ စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဘုရားကျောင်း ကို မရောထွေးဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဂျာမန် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တွေ ၁၈၆၉ (Eisenach Programme of 1869) မှာ ဖော်ပြထားပီးသားပါ။ “ဘာသာရေးဟာ ပုဂ္ဂလ ကိစ္စ ဖြစ်တယ်”ဆိုတာကို ၁၈၇၅ ဆိုရှယ် လစ် အလုပ်သမား ပါတီရဲ့ ဂိုထာပရိုဂရမ်မှာ ပါပီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့၊ ဒီအချက်က အချောင်သမားတွေကို တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်သလို ရှိတယ်။ မာ့စ်အရေးအသားမှာက၊ အလုပ်သမား ပါတီတွေဟာ “ဆင်ခြင် ဥာဏ်ကို အယူသီးမှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့” ကြိုးစားရမယ်လို့ ရေးထားတာပါ။ ဒီအတွေးအခေါ်ဟာ ဂျာမန် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁၈၉၁ (Erfurt Programme)မှာလည်း ထပ်ပါပါတယ်။ “ဘာသာ ရေး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လောကီလွန် ၀ါ လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပုဂ္ဂလ အသင်းအဖွဲ့တွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ်”လို့ ရေးထားပါတယ်။ “ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ အားလုံးကို ခြွင်းချက် မရှိ၊ ပုဂ္ဂလ အသင်းအဖွဲ့အဖြစ် အစိုးရက မှတ်ယူရမယ်၊ ဒီအဖွဲ့တွေဟာ အစိုးရဆီက ပြည်သူ့ရန်ပုံငွေကို ရယူစရာ အကြောင်း မရှိ၊ အစိုးရ စာသင်ကျောင်းတွေအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးစရာ အကြောင်း မရှိဘူး” လို့ အိန်ဂယ်ကလည်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဟာ အိန်ဂယ်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကို လစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။
လက်တွေ့မှာကျ၊ ပါတီက ဒီအချက်ကို တလွဲ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သလဲ ဆိုတော့၊ ဘာသာရေးဟာ ပုဂ္ဂလ ရေးရာ ဖြစ်တယ်၊ ဆိုလိုတာက ပါတီဝင်တယောက် ဘာသာရေးသမး ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆိုတာ ဟာ ပါတီကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူတယ်။ ဒီမူကို တခြားနိုင်ငံတွေက ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီတွေ လည်း လက်ခံကျင့်သုံးလာတော့၊ မာ့စ်ဝါဒဟာ ဘာသာရေးကို မဆန့်ကျင်ဘူး ဆိုတဲ့၊ အဓိပ္ပါယ်ရောက် သွားတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ အမေရိက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနဲ့ အင်္ဂလန်က အင်ဒီပန်ဒန့် လေဘာပါတီတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ဆိုရင်၊ သူတို့ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ် မူတွေဟာ ဘာသာရေးက ဆင်းသက်လာတာလို့ ဆိုတဲ့ အထိ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့၊ အချောင်သမားတွေကြောင့်၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒရဲ့ အခြေခံမူတွေဟာ အလုပ်သမားထုကြား အယူသည်းမှုကို မွေးမြူပေးဖို့လို ဖြစ်လာတယ်။ စစ်ပီးကတည်းကတိုင် ဆိုရှယ် ဒီမိုကရက်တွေဟာ မာ့စ်ဝါဒကို ငြင်းပယ်ပီး၊ ဘာသာရေးဘက် ဦးလှည့်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့်၊ ဘာ သာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ သဘောထားကို ပြန်ဖော်ပြဖို့ လိုလာပြီ။
ဒီသဘောတရားကို၊ လီနင်ရဲ့ စာတချို့ကို ကိုးကားပီး ရှေ့ဆောင်းပါးတွေမှာ အသေးစိတ် ဆက်ရေး သွားပါမယ်။ ၁၉၀၂-၁၉၂၂ အတွင်း လီနင် ရေးသားချက်တချို့ကို ကောက်နုတ်ပြောသွားမှာပါ။ ၁၉၀၈ မှာ လီနင်ရေးတဲ့ (Materialism and Empiriocriticism) မှာဆို၊ ဘသာရေး အမြင်တွေ ကဲနေတဲ့ အိုင် ဒီရယ်လစ် ဒဿနတွေကို ဝေဖန်ထားတာ ဖတ်ရမယ်။ ခေတ်သစ် အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ဘာ သာရေးအပေါ် သဘောထားပုံ၊ ဇာဘုရင်ခေတ် ဒူးမားလွှတ်တော်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေး နွေးငြင်းခုံချက်၊ လစ်ဘရယ်ဘူဇ၀ှာတွေနဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသမား ဘုရားကျောင်းတွေရဲ့ ခေတ်နော က်ပြန်ဆွဲ အယူအဆတွေ၊ ပါတီတွင်း ပါတီပြင် ဘာသာမဲ့မှုကိုယ်စား တရစပ် တိုက်ပွဲဝင်ရတာတွေကို ရေးသွားပါမယ်။ ဘာသာမဲ့နဲ့ ရုပ်ဝါဒီတွေအတွက် ညီညွှတ်ရေး တပ်ဦး လိုအပ်ပုံ၊ တော်စတွိုင်းရဲ့ ဘာ သာရေးအခြေခံ အတွေးအခေါ်တွေပေါ် ဝေဖန်ချက်၊ လယ်သမားထုရဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ အရေးပါပုံ တွေကိုလည်း ရေးသွားပါမယ်။
လီနင် ရေးသားချက်တွေကို အသေးစိတ် မပြောခင်၊ အနှစ်ချုပ် ပြရရင် (၁) ဘာသာမဲ့မှုဟာ မာ့စ်ဝါဒရဲ့ တရား ကိုယ်သဘောပဲ၊ ဒီ့အတွက် လူတန်းစား အကျိုးစီးပွားသိစိတ် နိုးကြားသူ မာ့စ်ဝါဒအခြေပြု ပါတီ ဟာ ဘာသာ မဲ့မှုအတွက် ၀ါဒဖြန့်တာ လုပ်ရမယ်။ (၂) ဘုရားကျောင်းရေးရာနဲ့ အစိုးရရေးရာ မရော ထွေးရေး၊ ဘုရား ကျောင်းနဲ့ အစိုးရစာသင်ကျောင်း မရောယှက်ရေးကို တောင်းဆိုရမယ်။ (၃) အလုပ်သမား လူတန်းစားကို စည်းရုံးဖို့ ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ နေ့တဓူဝ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက် စည်းရုံးဖို့ပဲ၊ ဒီအကျိုး စီးပွားတွေကို ကာကွယ်စည်းရုံးတာဟာ ဘာသာမဲ့မှု ၀ါဒဖြန့်တာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပီး၊ ဂရုတစိုက် စည်းရုံးရမယ်။ (၄) အလုပ်သမားထုရဲ့ ဘာသာရေးကနေ အဆုံးစွန် လွတ် မြောက်မှုဟာ အလုပ်သမား တော်လှန်ရေး ပီးလို့၊ ကွန်မြူနစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာ ပေါ်ပေါက်လာ လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဘာသာမဲ့မှုအတွက် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးကို ဘေးချိတ်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
လီနင်ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့ ဘာသာရေး
လက်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ မြေရှင်ကြီးတွေနဲ့ အရင်းရှင် လူတန်းစား လက်တဆုပ်စာက အလုပ်သမား လူတန်း စား လူများစုကြီးကို သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်မှုအပေါ် လုံးဝ အခြေခံထားတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်လူ့အ ဖွဲ့အစည်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့၊ လွတ်လပ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ တဘ၀လုံးကို အရင်းရှင်တွေ အမြတ်ထုတ်ဖို့ ပုံအပ်ထားရပေမဲ့၊ သူတို့အတွက်တော့ ၀မ်းစာလောက်ငရုံလောက်ပဲ ရရှိတယ်။ ဒီလောက်င ရုံလောက် ပေးထားရတာဟာလဲ အရင်းရှင်ရဲ့ ကျွန်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
အလုပ်သမားတွေ စီးပွားရေးအရ ဖိနှိပ်ခံရမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်ခံရမှုနဲ့ အလုပ်သမားထုကြီးရဲ့ စိတ်ပိုင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဘ၀ မှောင်မဲကြမ်းတမ်းပီး၊ လူမှုရေးအရပါ သိမ်ငယ် အရှက်ရစရာမျိုး တွေ ဖြစ်လာတယ်။ စီးပွားရေးအရ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အလုပ်သမားတွေမှာ နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ် ခွင့် အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့၊ အရင်းရှင်စနစ်ကို မဖြိုချနိုင်သရွေ့တော့၊ ဘယ်လို လွတ်လပ်ခွင့်ကမှ သူတို့ရဲ့ ဆင်းရဲ မွဲတေမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ အဖိနှိပ်ခံရမှုတွေ ကင်းပပျောက်ကင်း အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရေးက အလုပ်သမားထုအပေါ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးလို ခွစီး ထားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဖိနှိပ်ထားမှု ပုံစံတွေ ထဲက ဖိနှိပ်မှုပုံစံတမျိုးပဲ။ လူထုရဲ့ ဘ၀ဟာ တခြားသူ အတွက် ထာဝရ အလုပ် လုပ်ပေးနေရတာ၊ လိုအပ်ချက် တွေ ရှိနေတာ၊ ကူရာကယ်ရာမဲ့တာတွေနဲ့ ဖိစီးခံထားရတယ်။ အရိုင်းအစိုင်းတွေ သဘာဝရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ သိနိုင်စွမ်းမရှိခင်က ဘုရားသခင်၊ နတ်ဆိုး၊ အံ့သြဘနမ်းနဲ့ အလားတူ အကြောင်းအရာတွေကို ဖန်တီးယုံကြည် လိုက်ကြသလိုပဲ၊ သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်ခံ လူထုဟာ သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်သူတွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ ၀င်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့အခါ၊ သေလွန်ပီး နောက်ဘ၀မှ ပိုကောင်းတဲ့ ဘ၀မျိုး ရရှိရေး ဆိုတာကို ဖန်တီးလာကြတယ်။
ဘ၀တလျှောက်လုံး လိုတာမရ ဘ၀နဲ့ ရှင်သန်ပီး အလုပ် လုပ်နေရသူတွေကို လက်ရှိဘ၀မှာ နာခံဖို့၊ သည်းခံဖို့နဲ့ သေပီးနောက်ဘ၀ ကောင်းကင်ဘုံမှ စည်းစိမ်ခံဖို့ ဘာသာရေးက သင်ကြားပေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ တခြားသူတွေ ရဲ့ လုပ်အားနဲ့ ရှင်သန်နေသူတွေကိုကျတော့၊ လက်ရှိလောကမှာ အလှူအတန်း လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်၊ သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်သူအဖြစ် သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်နေမှုကို ဈေးပေါပေါနဲ့ တရားနည်းလမ်းကျကြောင်း သက်သေ ထူဖို့ လုပ်ပေး၊ ကောင်းကင်ဘုံက စည်းစိမ်အတွက် ဈေးနှုန်း အသင့်အတင့် လက်မှတ်ရောင်းပေးတာမျိုး ဘာသာရေးက လုပ်နေတယ်။ ဘာသာရေးဟာ လူတွေအတွက် ဘိန်းပဲ။ အရင်းရှင်တွေရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေသူ တွေကို သူတိုရဲ့ လူသားပုံရိပ်နဲ့ လူသား အဖြစ် ရှင်သန်ထိုက်တဲ့ ဘ၀တခု လိုလားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖျောက် ဖျက်စေတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မူးယစ်ရည်တမျိုးပဲ။
ဒါပေမဲ့၊ ကိုယ်ဟာ ကျွန်အပြုခံနေရမှုကို သဘောပေါက်လာပီး၊ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင် နေသူ ကျွန်ဟာ ကျွန်အဖြစ်ကနေ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် လွတ်မြောက်ပီး ဖြစ်တယ်။ စက်ရုံအ လုပ်ရုံကြီးတွေက မွေးထုတ်ပီး၊ မြို့ပြဘ၀က ဥာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့၊ လူတန်းစား အကျိုးစီးပွား သိစိတ်နိုးကြားပီးသား ခေတ်သစ် အလုပ်သမားကတော့၊ ဘာသာရေး အယူစွဲတွေကို စွန့်လွှတ်နိုင်ပြီ။ ကောင်းကင်ဘုံကို ဘုန်း တော်ကြီးတွေနဲ့ ဘူဇ၀ှာ တယူသန်တွေအတွက် ချန်ထားခဲ့ပီ။ ခုလောကမှာပဲ သူအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေး ကြိုးစားနေပြီ။ ကနေ့ခေတ် အလုပ်သမား လူတန်း စားဟာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို လက်ခံပီး၊ သိပ္ပံလက်နက်နဲ့ ဘာသာရေး မြူနှင်းအမိုက်အမှောင်ကို ရှင်းလင်း၊ သေပီးနောက်ဘ၀ ယုံကြည်မှုကနေ အလုပ် သမားတွေကို လွတ်မြောက်စေခြင်းအားဖြင့်၊ ခုဘ၀ ခုလောကမှာပဲ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြပြီ။
ဘာသာရေးဟာ လူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂလယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ကိစ္စသာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားမှာ ဆိုရှယ်လစ် တွေရဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် သဘောထားကို ဖော်ပြပီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့၊ နားလည်မှု မလွဲလို့ ဒီစကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို တိတိ ကျကျ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာသာရေးဟာ ပုဂ္ဂကိစ္စသာ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောတာက အစိုးရ ပိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ပတ်သက်မှု မရှိရဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့၊ ပါတီနဲ့ ပတ်သက် လာရင်တော့၊ ဘာသာရေး ဟာ ပုဂ္ဂရေးရာလို့ ကျနော်တို့ လက်ခံလို့ မရပါဘူး။ ဘာသာရေးဟာ အစိုးရ နဲ့ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှု မရှိရဘူး။ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့တွေဟာ အစိုးရ အာဏာပိုင်နဲ့လည်း ဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှု မရှိရဘူး။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်နိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရှိရမယ်။ ဘာသာမဲ့လို ဘာသာရေး မဟုတ်တာကိုလည်း ယုံကြည်ခွင့် ရှိရမယ်။ ဆိုရှယ်လစ်တွေအ တွက်တော့ ဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖို့ဟာ စည်းမျဉ်းအရ လိုအပ်ချက်တခုပဲ။ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုကို အခြေခံ ပီး၊ နိုင်ငံသားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာ လုံးဝ သည်းခံနိုင်စရာ မရှိဘူး။ အစိုးရ ရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေမှာ နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို ဖော်ပြတာ ကိုတောင် လုံးဝ ပယ်ဖျက်ပစ်ရမယ်။ နိုင်ငံတော် ဘုရားကျောင်းအဖြစ် အစိုးရဘဏ္ဍာထဲက ထောက်ပံ့တာမျိုး လုံးဝ မလုပ် သင့်သလို၊ လောကီလွန် လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကို အစိုးရ ထောက်ပံ့ ငွေ ပေးတာလည်း လုံးဝ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေဟာ အစိုးရနဲ့ ကင်းရှင်းတဲ့၊ စိတ်ကူကိုယ်တူ နိုင်ငံ သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အသင်းအပင်းမျိုးသာ ဖြစ်ရမယ်။
ပဒေသရာဇ်ခေတ်က ဘုရားကျောင်းတော်ဟာ အစိုးရပေါ် မှီခိုရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မတူသူကို ရှာဖွေနှိပ်ကွပ်တဲ့ အလယ်ခေတ် ဥပဒေတွေ (တချို့ဟာ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေနဲ့ ပြစ်မှု ဥပဒေ စာအုပ်တွေမှာ ရှိနေဆဲ)အောက်မှာ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေ နေထိုင်ခံရပီး၊ ယုံကြည်မှု မယုံကြည်မှု အတွက် အပြစ်ပေးခံရ၊ ကိုယ့်လွတ်လပ်စွာ ဆင်ခြင်ပိုင်ခွင့်ကို အချိုးဖောက်ခံရ နေထိုင်ခံရတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ၊ အစိုးရ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေနဲ့ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေဟာ နိုင်ငံတော် အသိ အမှတ်ပြု ဘုရားကျောင်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်နေခဲ့တယ်။ (အထက်က ဆိုခဲ့ပီး) ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရှိမှသာလျှင် ဒီအရှက် ရစရာ အတိတ်ဆိုးကို နိဂုံးသတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ ဘုရားကျောင်းတော် ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ အစိုးရ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေ မရောယှက်ဘဲ လုံးဝ ကင်းကင်း ရှင်းရှင်း ခွဲခြားထားရေးဟာ ဆိုရှယ်လစ် အလုပ်သမား လူတန်းစား တောင်းဆိုနေတဲ့ ခေတ်သစ် အစိုးရနဲ့ ခေတ်သစ် ဘုရားကျောင်းတော်မျိုးပဲ ဖြစ်တယ်။
ရုရှားတော်လှန်ရေးဟာ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် အခု တောင်းဆိုချက်တွေကို လက်တွေ့ အသက်ဝင်အောင် လုပ်ရမယ်။ ပဒေသရာဇ် သက်ဦးဆံပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးက ဘုန်းတော်ကြီးတွေကြား မကျေမချမ်း၊ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လုပ်နေပေမဲ့၊ ရုရှား တော်လှန်ရေးဟာ အခြေအနေ ကောင်းတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ အယူသည်း ရုရှားဘုန်းကြီး တွေ ဘယ်လောက် စက်ဆုပ် ပါစေ၊ ဘယ်လောက် မိုက်မဲပါစေ၊ ခေတ်ဟောင်း ရုရှား ပဒေသရာဇ်စနစ် ပြိုကျမှုကြောင့် အခုနေခါမှာ သူတို့တွေ (မိုက်မဲမှုတွေကနေ) နိုးထနေကြပါပြီ။ သူတို့တွေဟာ လွတ်လပ်မှု တောင်းဆိုရေး တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ပီး၊ ဗြူရို ကရက် အလေ့အထနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးကျွန်တွေ အပေါ် ရဲတပ်သားတွေ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်နေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဆိုရှယ်လစ် တွေဟာ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကူညီပီး၊ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ရိုးရိုးသားသား တောင်းဆိုချက်တွေ ပီးမြောက် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့တွေ ပြောတဲ့ စကား တည်အောင်၊ ဘာသာရေးနဲ့ ရဲတပ်သာတွေကြား ဆက်နွှယ်မှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြတ်တောက်အောင် တောင်း ဆိုရပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ အမှန်တကယ် ရိုးရိုးသာသား ဆိုရင်၊ ဘုရားကျောင်းတော် ရေးရာနဲ့ နိုင်ငံတော် ရေးရာကို လုံးဝ ခွဲခြားထားရေး၊ အစိုးရ စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဘုရားကျောင်း သင်ကြားမှုကို လုံးဝ ခွဲခြား ထားရေး၊ ဘာသာရေးဟာ ပုဂ္ဂလရေးရာအဖြစ် လုံးဝ လက်ခံရေးအတွက် ရပ်တည်ရမယ်။ မဟုတ် ရင် တော့၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ရှေ့နောက်ညီညွှတ်မှု ရှိတဲ့ လွတ်လပ်မှု တောင်းဆိုချက်တွေကို ငြင်းပယ်နေစဲ ဖြစ်ပီး၊ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှု ဥပဒေတွေနဲ့ အစဉ်အလာရဲ့ သားကောင်းအဖြစ်ကနေ မလွတ်မြောက် သေးဘူး၊ အစိုးရ လုပ်ငန်းနဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို မှီခိုရပ်တည်နေစဲဖြစ်ပီး၊ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာရေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လက်နက်ကို မယုံကြည်ဘဲ အစိုးရဆီက လာဘ်ယူမြဲ ယူနေစဲဖြစ်တယ်။ ဒီလို ဆိုရင်တော့ လူတန်းစား အကျိုးစီးပွား သိစိတ်နိုးကြားပီးသား ရုရှားတနိုင်ငံလုံးက အလုပ်သမားတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ အပေါ် မညှာမတာ စစ်ကြေ ညာရလိမ့်မယ်။
ဆိုရှယ်လစ် အလုပ်သမား ပါတီနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဘာသာရေးဟာ ပုဂ္ဂရေးရာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် တို့ ပါတီ ဟာ အလုပ်သမား လူတန်းစား လွတ်မြောက်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့၊ လူတန်းစား အကျိုးစီးပွားသိစိတ် နိုးကြားပီးသား ပါတီအသင်းအဖွဲ့ပဲ။ ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့မျိုးဟာ ပါတီတွင်း လူတန်းစား သိစိတ်မဲ့မှု၊ ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်ပုံစံနဲ့ မိုက်မဲေ၀၀ါးမှုတွေကို ဘာသိဘာသာ လက်ခံထားလို့ မရဘူး။ ဘာသာရေး မြူနှင်းအမှောင် တိုက်ကို အတွေးအခေါ်သန့်သန့်တခုတည်း၊ အတွေးခေါ် လက်နက် တခုတည်း အသုံးပြုပီး၊ ပါတီသတင်းစာနဲ့ ပါတီစည်းရုံးရေးကတဆင့် တိုက်ဖျက်ရမယ်။ အလုပ်သမားထုကို ဘာသာရေးတွေဝေမှုတွေကနေ ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ရုရှားဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် လေဘာ ပါတီကို ကျနော်တို့ ထူထောင်ခဲ့တာပဲ။ ကျနော်တို့အတွက် အတွေးအခေါ် တိုက်ပွဲဟာ ပုဂ္ဂလ ရေးရာ မဟုတ်ဘူး။ ပါတီတခုလုံး ရေးရာ၊ အလုပ်သမား လူတန်းစားထု တခုလုံး ရေးရာ ဖြစ်တယ်။
ဒါဆို၊ ပါတီကြေညာစာတမ်းမှာ ကျနော်တို့ဟာ ဘာသာမဲ့တွေပါလို့ ဘာကြောင့် မကြေညာရသလဲ။ ခရစ်ရှန်နဲ့ တခြား ဘုရားသခင် ယုံကြည်သူတွေကို ပါတီထဲ ဘာကြောင့် ၀င်ခွင့်ပြုသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရာမှာ၊ ဘာသာ ရေး ပြဿနာကို ဘူဇ၀ှာ ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရက်တွေကြား ကွဲပြားခြား နက်ချက်ကိုပါ ရှင်းပြရ လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီကြေညာစာတမ်းဟာ သိပ္ပံနည်းကျ၊ ရုပ်ဝါဒ ကမ္ဘာ့အမြင်မှာ အခြေခံထားတယ်။ ဒါ ကြောင့်၊ ပါတီကြေညာစာတမ်းကို ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ၊ ဘာသာရေး မြူနှင်း အမှောင်တိုက်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ သမိုင်း ကြောင်းရေးရာ ဇာစ်မြစ်ကိုပါ ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပါတီ ၀ါဒဖြန့်ချိမှုမှာ ဘာသာမဲ့မှုအတွက် ၀ါဒဖြန့်ချိမှုပါ မဖြစ် မနေ ပါရပါတယ်။ ပဒေသရာဇ် အစိုးရ အခုထိ နှိပ်ကွပ် တားမြစ်တဲ့ စာပေတွေဟာ ပါတီလုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တခု ဖြစ်လာရပါမယ်။ တခါတုန်းက ဂျာမန် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တွေကို အိန်ဂယ် အကြံပေးခဲ့သလို၊ ၁၈ ရာစု ပြင်သစ် ဥာဏ်အလင်းပွင့်ခေတ် စာပေတွေနဲ့ ဘာသာမဲ့တွေရဲ့ စာတွေကို ဘာသာပြန်ပီး၊ အကျယ်အပြန့် ဖြန့် နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့၊ ဘာသာရေး ပြဿနာကို ဘူဇ၀ှာတွေ လုပ်သလို၊ လူတန်းစား တိုက်ပွဲနဲ့ ကင်းကွာပီး ဖြေရှင်း တဲ့ အမှားမျိုးထဲ ဘယ်လို အခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကျရောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တရစပ် အဖိနှိပ်ခံလာရ တဲ့ အလုပ် သမားထုရဲ့ ဘာသာရေး ဆန္ဒစွဲအမြင်တွေကို ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သက်သက်နဲ့ အစွဲချွတ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေး ဟာ အတော် မိုက်မဲရာကျပါတယ်။ လူသားတွေကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးလို ဖိစီးထားတဲ့ ဘာသာရေး လှည်းတံပိုးဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်း စီးပွားရေးအရ အဖိနှိပ်အမြတ်ထုတ်ခံရမှုက ထွက် ပေါ်လာတဲ့ ထွက်ကုန် သို့မဟုတ် ဒီအခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပေးနေမှု ဆိုတာကို ထည့်မစဉ်းစားရင် ဘူဇ၀ှာတွေရဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုမျိုးပါပဲ။ လက်ကမ်းစာစောင် ဘယ်လောက် များများနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ဖြန့်၊ ဘယ်လောက်ပင် တရားဟောဟော အလုပ် သမားထုကို အသိဥာဏ်ပွင့်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အမှောင်ထု အင်အားကို အလုပ်သမားထု ကိုယ်တိုင် ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်မှသာလျှင် သူရဲ့ ဥာဏ်အလင်း ပွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ နတ်နည်းကို အလုပ်သမားထုတွေ တညီတညွှတ် တည်း ယုံကြည်နေတာထက်၊ အခု လက်တွေ့ လောကမှာ ကောင်း ကင်နတ်ဘုံ ဖန်တီးတည်ဆောက် နိုင်ရေးအတွက် အဖိနှိပ်ခံတွေ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲမှာ ညီညွှတ်မှုက ပိုအခ ရာကျပါတယ်။
ဒါကြောင့်၊ ဘာသာမဲ့မှု ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပါတီကြေညာစာတမ်းမှာ မထည့်တာ၊ မထည့်သင့်တာပါ။ ဒါကြောင့်၊ ခေတ်ဟောင်းက ဘာသာရေးဆန္ဒစွဲအမြင် မကင်းသေးသူတွေ ပါတီနဲ့ ချိတ်ဆက်လာရင် ကျနော်တို့ မတားမြစ်တာ၊ မပိတ်ပင်သင့်တာပါ။ သိပ္ပံနည်းကျ ကမ္ဘာအမြင်ကို ကျနော်တို့ အမြဲ ဟော ပြောပီး၊ ခရစ် ရှန်အယူအဆ အမျိုးမျိုးရဲ့ ရှေ့နောက် မညီညွှတ်မှုတွေကို တိုက်ခိုက်သွားဖို့ဟာ ကျနော် တို့အတွက် လိုအပ်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ဒါဟာ ဘာသာရေး ပြဿနာကို ရှေ့တန်းတင်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ ဘူး။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အတွေး အခေါ်တွေကြောင့် စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကို ကွဲစေရ မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
နေရာတိုင်းမှာ၊ ခေတ်နောက်ပြန်စွဲ ဘူဇ၀ှာတွေဟာ ရုရှားတနိုင်ငံလုံးက အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေ တော် လှန်ရေး တိုက်ပွဲမှာ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အခြေခံ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကနေ အလုပ်သမားထု အာရုံလွှဲသွားအောင်၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ အလုပ်သမား လူတန်းစား အင်အားစုကို အင်အားကွဲဖို့ ဖန်တီးနေတဲ့ ဒီခေတ်နောက်ပြန်စွဲ မူဝါဒတွေကို ကျနော်တို့က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အလုပ်သမားထု သွေးစည်းရေးအတွက် ဟောပြော ရင်း၊ သိပ္ပံအခြေပြု ကမ္ဘာ့အမြင်ကို ရှင်းပြ ရင်း ဆန့်ကျင်သွားရပါမယ်။ တော်လှန်တဲ့ အလုပ်သမားထု ဟာ နိုင်ငံတော်ရေးရာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာသာ ရေးဟာ ပုဂ္ဂလ ကိစ္စဆိုတာကို လက်ခံလာအောင် အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အလယ်ခေတ် ဘာ သာရေး အမှောင်တိုက်က ကင်းရှင်းလာတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ၊ လူသားထုကို ဘာသာရေးအရ လိမ်ညာမှိုင်း သွင်းထားစေတဲ့ အဓိက လက်သည် တရားခံ စီးပွားရေးကျွန်ပြုမှုကို သုတ်သင်ရေးအတွက် အလုပ်သမားထုဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ချ တိုက်ပွဲဝင်သွားရပါလိမ့်မယ်။
(လီနင်ရဲ့ Religion စာအုပ်ကို ကိုးကားပြန်ဆိုတယ်။)